पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आदित्यनाथसँग वार्ता कसरी जुर्‍यो? – Etajakhabar
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आदित्यनाथसँग वार्ता कसरी जुर्‍यो?
काठमाडौं, पुस २५। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथबीच सोमबार डेढ घन्टा वार्ता भएको छ। मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम नेपालको निजी भ्रमणमा रहेका शाह आइतबार नेपालगन्जबाट लखनउ पुगेका थिए। पूर्वराजाले आदित्यनाथको सरकारी निवास ५ कालिदासमार्गमा सोमबार बिहान ९ देखि साढे १० बजेसम्म भेटवार्ता गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा विदेश राज्यमन्त्री जनरल भिके सिंहसँग पूर्वराजासँग तय भएको भेटबारे छलफल गरेका थिए। यो खबर पर्शुराम काफ्लेले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष २५, २०७४ समय: ७:१६:१८